Banyere anyị - Zhengzhou MG Industrial Co., Ltd.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Zhengzhou MG Industrial Co., Ltd. onye ndu premixed akọrọ ngwa agha akụrụngwa emeputa!
Zhengzhou MG Industrial Co., Ltd., otu n'ime nnukwu ụlọ ọrụ ọkachamara mbụ, na-arụ ọrụ n'ịrụpụta ngwá ụlọ na mmepe nke usoro nchịkwa akpaka nwere ọgụgụ isi na China. Ọ bụ ụlọ ọrụ sayensị na teknụzụ pụtara ìhè na mpaghara Henan, onye otu Henan Provincial Alliance of Quality and Credit, yana onye otu ISO9001 International Quality Certification na European Union CE Certification Unit. Ụlọ ọrụ ahụ dị na National Innovation Park - Zhengzhou High-tech Development Zone, nke dị nso na Science Avenue na eriri gburugburu obodo ahụ, na-eji ụgbụ njem dị mma.
MG isi atọ usoro nke n'ibu akụrụngwa: mbụ, High-arụmọrụ Ịgwakọta Equipment, Spiral Ribbon Mixer, Twin-shift Agravic Mixer, Centrifugal Drum Mixer, Dry Mortar Production Line, Thermal Insulation Mortar Production Line na ndị ọzọ dị elu-arụ ọrụ ngwakọta akụrụngwa; nke abụọ, kacha ọhụrụ ihicha akụrụngwa, Long Drum Dryer, atọ cylinder Dryer na ndị ọzọ ihicha akụrụngwa; nke atọ, Onye na-anakọta uzuzu na-akpali akpali, igwe nkwakọ ngwaahịa akpaaka, ihuenyo na-ama jijiji, ihe na-ebufe na ihe na-ebuli elu, ihe na-ebufe pneumatic, ngwa palletizing na ngwa enyemaka ndị ọzọ.
Ụlọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ njikwa ọkwa dị elu na ọtụtụ ndị ọkachamara na ndị nyocha nke ọma. Ụlọ ọrụ ahụ na-ahazi ọzụzụ maka ndị ọrụ mgbe niile iji hụ na a na-emeziwanye àgwà na nkà ha mgbe niile iji mezuo ihe ndị a chọrọ maka mmepe ahịa.
Dị ka ọnọdụ n'ezie nke onye ọ bụla ahịa (ego ego, osisi ọnọdụ, ihe e ji mara, ngwaahịa usoro, wdg), ụlọ ọrụ nwere ike ịkwa akwa a ezi uche bara uru na oru oma ngwọta ngwọta maka ndị ahịa.
A na-eji ngwaahịa MG eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ihe owuwu ụlọ 1000 na China, ma na-ebuga ya karịa mba na mpaghara 50, dị ka Canada, Russia, Korea, Malaysia, United Arab Emirates, Argentina, Chile, Ecuador, Morocco, South Africa, Nigeria, wdg.
N'ịdabere na nkà ihe ọmụma azụmahịa nke "Product Quality First ， Ndị Ahịa Kasị Mma", MG ga-adị njikere iji ngwaahịa ka mma na-ejere ọha mmadụ ozi. MG ji ezi obi na-akpọ ndị ọrụ ibe na ụlọ na mba ọzọ ka ha gaa na mgbanwe, kparịta ụka na imekọ ihe ọnụ. MG ga-adị njikere ka gị na gị rụkọọ ọrụ ka ịchọọ mmepe na-emepe emepe ma mepụta ọmarịcha.